Dowlada Soomaaliya maku guuleesan doonta dacwada Bada ? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaDowlada Soomaaliya maku guuleesan doonta dacwada Bada ?
Isbuuca Danbe waxaa dalka Holand ka bilaaban rabo Maxkamada Caalamiga ICJ dooda u dhaxeeyso Kenya Iyo Somalia.
Dacwada Bada Soomaaliya iyo Kenya ayaa so martay marxalado kala gadisan waxaana si rasmi dhawaan ufurmi doona dooda labada dhinac.
Soomaaliya ayaa rajo wayn ka qabta in looxukmin doona Kiiska walloow ay jiraan shaki laga muujinayo in dowlada farmaajo ay daacad ka tahay kiiska dacwada.
Dowlada Kenya ayaa dhowr jeer isku dayday in kiiskaan lagu xaliyo meel ka baxsan Maxkamada Caalamiga ICJ.